गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने ‘पीएचडी’लाई कांग्रेसले अर्थमन्त्री बनाउँदा नेपाल अन्धयुगमा !
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले सामाजिक न्याय वा उच्च आर्थिक वृद्धिमध्ये एक कुरा छाड्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सुझाव दिएका छन् ।
सामाजिक न्याय र उच्चतम् वृद्धिदर सँगसँगै जान नसक्ने उनको तर्क छ ।
‘कांग्रेसको शासनकालमा गहुँ र धानको फरक बुझ्न नसक्ने अमेरिकाबाट पीएचडी होल्डर (विद्यावारिधि गरेका) लाई अर्थमन्त्री बनाइयो । त्यस्ता अर्थमन्त्री जसलाई प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्न नसक्ने मान्छे अर्थमन्त्री बने,’ गिरीले व्यंग्य गरे, ‘बीपीले लामो अध्ययनपछि भन्नुभयो, विकासको यो मोडेल हामीलाई चाहिँदैन, अमेरिकाको मोडल धान्न सकिँदैन । तर बीपीका उत्तराधिकारी हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले पीएचडी गरेको भरसक अमेरिकामा पीएचडी गरेको, नभए जर्मनीमा पीएचडी गरेकोलाई अर्थमन्त्री बनाए ।’